ढिलो होस् वा चाँडो त्यहाँ madding भीड देखि थकान आउँछ। यस्तो क्षणमा मा तपाईंले केही Serenity, detachment र शान्ति चाहन्छौं। र यो सबै तपाईं शहर छोड्न निर्णय भने मात्र पाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, त्यहाँ एक सुरम्य Lesoparkovy एरे छ जहाँ वोरोनिश, को सरहद मा एउटा सानो आरामदायक क्याफे "Glade" (वोरोनिश) छ। यो स्थान के हो? भन्दा यो आगंतुकों आकर्षित? र जहाँसम्म यो रोचक छ रूपमा समय बिताउन?
सत्कार रूसी पहिलो छाप वा घरेलु
क्रममा पूरै स्थानमा क्याफे "Glade" (वोरोनिश) छ बुझ्न, यो कम्तिमा अस्थायी रूपमा आफ्नो आँखा बन्द र आफ्नो कल्पना प्रयोग आवश्यक छ। बस कल्पना: शहर को कुनै bustle, शहर देखि यसको remoteness, greenery र ठाँउहरु धेरै, प्राकृतिक काठ बाट बनेको चराहरूले गाइरहेका, सुन्दर घरहरू प्रकृति र विश्राम संग अधिकतम carved ढाँचासँग एकता। यो कहाँ यो एक सत्कार रूसी Manor जस्तो जो "Glade", अनुपम ठाउँ हो।
संस्था को संक्षिप्त विवरण
क्याफे "Glade" (वोरोनिश, शहर जहाँ यो स्थित छ) जटिल एक प्रकारको छ। निम्न सुविधाहरु यसको क्षेत्रमा अवस्थित छन्:
एक ठूलो खेल मैदान।
कार पार्किङ स्थान।
एक विशाल गर्मी छत खुला।
गन्तव्यहरू (राम्रो पसलहरूमा, priparkovaya क्षेत्र)।
यस क्याफे "Glade" (वोरोनिश) को मुख्य शरीर को पाइन काठ को केन्द्र नजिकै स्थित छ। को स्थानीय अनुसार, यो आश्चर्यजनक सुन्दर छ पाइन सुई को Smells, र त्यहाँ विश्राम संग सुखद संगतले छन्।
को भित्री को विशेषता विशेषताहरु: निर्माण भित्र के
पहिलो पटक यो रेस्टुरेन्ट गएर हामी आफ्नो अद्वितीय र सामान्य थिम्ड भित्री ध्यान गर्न सक्दैन। मूल्याङ्कन संस्था अनुसार, यो एक परम्परागत जर्मन शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो यस्तो जर्मन गाउँ नै रूस को हृदयमा व्यावहारिक छ। र यो भवन, दुवै भित्र र बाहिर परम्परागत जर्मन पब प्रकाश आशय एक क्लासिक गाउँ घर जस्तो देखिन्छ।
यसको भित्री मा एक एकदम विशाल काठको फर्नीचर, घुम्रेको रोशनी छ। खिडकियों को काठ शटर मा चमकदार वार्निश सजाउनु। पर्खालहरु मा एक युरोपेली शैलीमा प्रतीक र तस्बिरहरू एक सेट मूल स्थापना अड्किनुहोस्। ती सबै चिटिक्क काठ फ्रेम मा राखिनेछ। यी चित्रहरू एक जंगल "Glade" (क्याफे, वोरोनिश) देखाउँछ मा।
यो चिमनी र यसको सुविधाहरू
विशेष ध्यान एक वास्तविक चिमनी, कोठा को केन्द्र (प्रवेश मा) निकट स्थित दिइएको छ। यो एकदम काम हो कि गलत विश्वास विपरीत। केही प्रयोगकर्ताहरूको खाता अनुसार, यो gracefully crackling र चिसो हिउँदमा न्यानो छ।
र आफ्नो हुड टाढा परिसर बाहिर जान्छ को कारण भित्र कुनै धुवाँ र बलिरहेको को गंध छ। त्यसको विपरीत, यो जहाँ तपाईं, आराम गर्न खोलन बाहिर द्वीपसमूह र न्यानो plaid को काखमा अप न्यानो चाहनुहुन्छ एक अद्वितीय र घर-जस्तो सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, यस्तै मुद्रण को भित्री ठाउँमा उपस्थित छ। अक्सर बक्समा आफ्नो tablecloth चित्रित मा, नैपकिन खडा र सुन्दर विकर breadbaskets लागि bezel। यहाँ मूल र आरामदायक क्याफे "Glade" (वोरोनिश) छ। यसको मेनु मुख्य रूप युरोपेली भोजन सामेल छ, तर हामी यसको बारेमा भन्नेछु पछि।
उत्सव, क्षमता र अन्य सुविधा को हल
यस क्याफे आगन्तुकहरूलाई सधैं एक ठूलो र विशाल मा एक पिकनिक बीच चयन गर्ने अधिकार, तर साधारण कोठा वा सानो alcove, तर ताजा हावा छ। खैर, उत्तरार्द्ध छनौट, तपाईं चरा को गायन प्रशस्त, पाइन सुई र वन्यजन्तु को शानदार दृश्यहरु गंध आनन्द उठाउन सक्छौं। एक ठूलो र एउटा सानो: चाहेको भने, आफ्नो छुट्टी बस दुई कोठा स्थित छ जो कोठा, मा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
मा सानो हल को भारी लोड (ज्यादातर सार्वजनिक) दिन 110-120 मान्छे सम्म समायोजित गर्न तयार छ। ठूलो केन्द्रीय हल पनि आराम र बाहिर झुन्डिएको लागि सही ठाउँ हुनेछ। यो 140-150 सिट लागि डिजाइन गरिएको छ। यहाँ, साथै सडक मा, तपाईँ नृत्य र सबै भन्दा राम्रो रूसी परम्परा मा खानाको स्वाद गर्न सक्छन्। र सही लहर बल्लतल्ल श्रव्य पृष्ठभूमि संगीत मा तपाईं धुन मदत गर्न।
कहिलेकाहीं, यहाँ संगीतकार, डीजे र थिम्ड शो आउनुहोस्। खैर, छोराछोरीको दल र उत्सव को संगठनमा सधैं अनुभवी एनिमेटरहरु क्याफे "Glade" (वोरोनिश) को सेवा आदेश छोराछोरीको प्रेरित मौका छ। Moskovsky संभावना, 167 / बी: संस्था को ठेगाना
बच्चाहरु मजा र आमाबाबुको मनोरञ्जन
यो क्याफे आउने, यो एक ठूलो खेल मैदान, एक चढाई पार्क र, को पाठ्यक्रम, एक खेल्ने खोठा को प्रकारको आवंटित गर्न आवश्यक छ। जहाँ तपाईं एउटा पाठ पनि सानो आगंतुकों पाउनुहुनेछ। यहाँ तिनीहरूलाई प्रयोगकर्ता कथाहरू रंग अनुसार, sculpt, खेल, र पनि रचनात्मक काममा संलग्न।
भान्सा र मेनु विशेष
यो संस्थाले मेनू को बस दुई प्रकार, बच्चाहरु र वयस्क लागि डिजाइन लागि प्रदान उमेर-सम्बन्धित आकस्मिक को एक किसिम जाँदै छ देखि। वयस्क को एक क्लासिक विकल्प, सामान्यतया तला कुखुराको पखेटा, अचार, flavorful जर्मन sausages, सलाद र पाठ्यक्रम ग्रिल मा मासु व्यञ्जन विभिन्न पर्छ।
जर्मन बियर प्रेमीहरूको नाश्ता र धूम्रपान को एक किसिम संग फोम prikusku मा आफ्नो मनपर्ने पेय टेस्टिङ, आनन्द उठाउन सक्छौं। एक मिठाई मिठाईहरू, केक र तातो चकलेट पनि छ। मीठो प्रेमीहरूको पक्कै मेपल स्वाद सिरप वा फल लेपित वेफर्स रुचि हुनेछ।
क्याफे "Glade" (वोरोनिश): समीक्षा
यस साइटमा समीक्षा तपाईं एक किसिम सुन्न सक्नुहुन्छ। केही मानिसहरू यसलाई मन पराएका, र केही यो अद्भुत ठाउँ को असामान्य प्रकृति बुझ्न समय छैन। उदाहरणका लागि, केही प्रयोगकर्ताहरूले राम्रो सेवा र स्वादिष्ट खाना मन परायो। अरूलाई छोराछोरीलाई कार्यकर्ता animatorskie क्याफे र ध्यान को क्षमता मूल्यांकन।
अरूलाई पेशेवर हुक्का बेचिन्छ र सुगन्धित धुवाँ छल्ले उड्ने थिए। चौथो को शहरी वातावरण ठाउँ टाढा निर्माण को निर्माण गर्न सुविधाजनक पहुँच, एक सुखद वातावरण र स्थान singled। केही क्याफे संरक्षक गर्न कामदारहरूलाई को लोयल्टी अनुमान गर्न समय भएको थियो। तिनीहरूलाई लागि, उदाहरणका लागि, एक छुट प्रणाली, र छूट संचालित। सामान्य मा, प्रत्येक आफ्नै गर्न।
येकाटिरिनबर्ग सर्वश्रेष्ठ पब
रेस्टुरेन्ट मास्को मा "सुन जस्तो माछा"
स्टेशनरी ब्लेंडर - आधुनिक विकल्प
भविष्यमा भवन लागि आधार - एक "lego" आधार कसरी बनाउने
सिर्जना सामाग्री - कसरी बनाउने ग्लास "Maynkraft"
बैंक मा नूनिलो खरबुजा - सबै भन्दा राम्रो खाजा